संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुनबाट रोक्ला सभामुखको पत्रले ? – Nepal Press
२०७७ माघ १८ गते २०:१२
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस फिर्ता पठाएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति के होलान् भन्ने प्रश्न छ ।
प्रधानमन्त्री निकटक एकजना नेता भने संवैधानिक परिषद्बाट भएको नियुक्तिलाई अघि बढाउन समस्या नहुने बताए । संसद विघटन हुनुअघि नै सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा संवैधानिक परिषदको पत्र दर्ता भइसकेकाले ४५ दिन भित्र समितिको निर्णय हुन नसकेको आधार बनाइ नियुक्त गर्न सकिने ती नेताको भनाइ छ ।
‘संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्याे, त्यो निर्णयलाई संसदमा पठाइयो’ उनको भनाइ छ, ‘विघटन हुनुभन्दा अगाडि त्यो संसदमा दर्ता भयो । सभामुखको उत्तरबाट पनि त्यो कुरा देखिन्छ । संसद विघटन भइसकेकाले उहाँले त्यसलाई समितिमा पठाउन सक्नु भएन । तर, समिति समाप्त हुनुअघि नै संवैधानिक परिषद्ले सुनुवाइका लागि पत्र पठाइसकेको थियो । त्यसकारण ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय दिन नसेको आधारमा टेकेर नियुक्त गर्न सकिन्छ ।’
संसद सचिवालयमा संसद विघटनअघि नै परिषद्को निर्णय दर्ता भएको भन्ने सरकारी पक्षको दावी र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीले ४५ दिन तोकेको बारे चाहिं उनी संविधानको व्यवस्थालाई ऐनले काट्न नसक्ने बताउँछन् ।
बिडारीको प्रश्न छ–संविधानलाई नियमावलीले काट्छ र ? सुनुवाई हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ । तिनीहरू नियुक्ति योग्य हुँदैनन् ।
संसद सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा परिषद्को निर्णय नपुगी ४५ दिनको व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने बताउँछन् । सुनुवाई नगरी नियुक्त गर्दा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै सरकारले नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउने श्विास व्यक्त गर्छन ।
‘समितिमा नपुगिकन ४५ दिनको व्यवस्था लागू गरेर नियुक्त गर्न मिल्दैन’ उनको भनाइ छ, ‘नियुक्तिको प्रयास नगर्ला सरकारले किनभने त्यो अदालतमा जान्छ । सुनुवाई समिति अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा समितिले ४५ दिन भित्रमा कुनै जवाफ नदिएमा मात्रै स्वतः नियुक्त गर्न बाधा हुँदैन । तर, सुनुवाई नै नभइ नियुक्त नै गर्न मिल्दैन । त्यो वैध नै हुँदैन ।’
संसद नहुँदा लामो समय संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नभएको नजिर भएको दावी गर्दै थापाले भने, ‘सरकारले लामो समयसम्म अख्तियार, महालेखा लगायतमा तीन/चार वर्ष नियुक्ति गरेन । त्यो नगर्नुको एउटै कारण संसद थिएन ।’
अदालतमा संवैधानिक अध्यादेश र त्यस अध्यादेश अनुसार भएको नियुक्ति विरुद्ध रिट परेको अवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेशविरुद्ध र अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् ।
अदालतले यसको सुनुवाई गरेको छैन । यसमा कुनै आदेश पनि जारी गरेको छैन । अर्कोतिर सभामुखले अदालतलाई दिएको जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वीकार गरेका थिएनन् भने आइतवारको पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था स्वीकार गर्दै सुनुवाई हुन नसकेको बताएका छन् ।
प्रकाशित: २०७७ माघ १८ गते २०:१२